गुगल एनालिटिक्स: तेस्रो पार्टी पृष्ठ ट्र्याक गर्दै Martech Zone
बिहीबार, अगस्ट 16, 2007 शुक्रबार, अगस्त 17, 2007 Douglas Karr
तपाईले पढ्नु भएको छ कि मैले MillionDollarWiki। यो मेरो साइटमा यातायात चलाउन मद्दतको लागि पैसाको मोल हो - मलाई लाग्छ कि यो धेरै कम्पनीहरूको लागि ठूलो ब्याब्याकको साथ न्यूनतम लगानी गर्न ठूलो अवसर हो। विशेष धन्यवाद जॉन चौ विचार उत्तेजित को लागी!
मैले खरीद गरें इमेल मार्केटिङ, कर्पोरेट ब्लगि र वेब विश्लेषण पृष्ठहरू र सामग्री विस्तार गर्न जारी राख्न चाहनुहुन्छ क्रमशः ईमेल मार्केटिंग र कर्पोरेट ब्लगि withसँग केहि गर्नका लागि विस्तृत स्रोत हुन। एक सय डलरको लगानी संग, यदि विकीले लोकप्रियतामा निरन्तर प्रगति गरिरह्यो भने यो वास्तवमै नो ब्रेनर हो।
वास्तविक प्रश्न हो कि यो एक भरपर्दो स्रोतको रूपमा देखिनेछ वा छैन! यदि यो होईन भने, व्यक्तिले यसलाई प्रयोग गर्दैनन् - र यसले मेरो लगानीमा कुनै प्रतिफल असफल हुने छ। म विश्वास गर्छु कि यो जुवाको लागि मूल्यवान छ - विशेष गरी यदि मैले त्यसलाई जित्न सक्दछु LCD कि जोन आफ्नो प्रतिस्पर्धा मा छ!
'मेरो लगानी हेर्न', म ट्र्याक गर्न सक्षम हुन चाहन्छु कति व्यक्ति वास्तवमा विकी पृष्ठमा छन्। धन्यबाद, MillionDollarWiki मा व्यक्तिहरूले आफ्नो पृष्ठ भित्र फ्रेम प्रयोग गरेर अरू पृष्ठहरू सम्मिलित गर्न अनुमति दिइरहेका छन्। विकी सिन्ट्याक्स निम्नानुसार छ:
उचाई = १००
चौडाई = 100
सीमा = ०
स्क्रोल = होईन
त्यसोभए, पृष्ठ ट्र्याक गर्न धेरै सरल छ। मैले पृष्ठ थपें मेरो आफ्नै साइट यसमा मेरो Google एनालिटिक्स ट्र्याकिंग कोड छ। मैले त्यो पृष्ठलाई वेबसाइट फ्रेममा सन्दर्भ गर्‍यो र उचाई र चौडाइ दुबै १ मा सेट गरें।
चौडाई = 1
प्रत्येक चोटि कसैले विकी पृष्ठ भ्रमण गर्दा यो मेरो गुगल एनालिटिक्समा देखिनेछ। म यसलाई स्वतन्त्र रूपमा ट्र्याक गर्न सक्दछु भनेर सुनिश्चित गर्न, मैले विकी पृष्ठ ट्र्याक गर्न मेरो एनालिटिक्स कोडमा एक प्यारामिटर थपेको छ। यो कोड mytrackingpage.html मा हो: